Ahoana ny fomba hiresahana amin'ny ankizy iray mba hahafantarany anao
Izahay, amin'ny maha-ray aman-dreny anay, dia te-hamonjy ny ankizy amin'ny zava-dratsy rehetra: samy avy amin'ny fiaramanidina mampidi-doza, ary avy amin'ny fanantenana tsy misy fanantenana. Nefa matetika no vitantsika ny manatratra azy ireo? Tahaka ny hoe misafidy ny teny marina isika, manonona ny fanoheran'ny vy, saingy tsy afaka ny hahatakatra ny fifankahazoana isika. Toy ny hoe miteny isika amin'ny fiteny samihafa.
Ary ny zava-drehetra satria miteny avy amin'ny toerana manan-danja ny olon-dehibe iray isika ary tsy manaiky ny fiheveran'ny ankizy ny fahitan'ny ankizy an'izao tontolo izao. Ny mpampianatra sy mpanoratra ny boky ho an'ny ray aman-dreny Zaryana sy Nina Nekrasov ao amin'ny bokiny "Tsy misy loza: hatramin'ny fahaterahana any am-pianarana" dia manome toro-hevitra amin'ny 7 ny fomba hiresahana amin'ny ankizy mba hihaino sy hahatakatra azy.
"Ny fitenin'ny ankizy", na ny fomba hilazana fa takatr'ilay zaza izany
Hazavao mazava tsara.
Asehoy ny zavatra tsy fantatry ny zanakao (farafaharatsiny ny fihomehezana) - ary hanatona azy avy hatrany izy. Fihetseham-po, mihozohozo, andramo ny nify - izany no fomba tsara hampiasaina amin'ilay foto-kevitra, hianaro zavatra vaovao. Ary ny hevitry ny ankizy, dia toa tsy mitovy: sary, sary. (Amin'ny fisainana voalohany dia ny fahombiazan'ny maso-maso, ary avy eo - ny endrika ara-tarehimarika-ary ny zaza ihany no hitombo ho lojika.)
Mba hahatsiarovan'ny ankizy iray zavatra iray, dia tsy manana zavatra heno izy. Tsy maintsy mahita, mahatsapa, mahatsapa amin'ny alalan'ny eritreritra sy ny fihetseham-po izy (amin'ny lafiny, ny fomba fiasa ananantsika dia miasa toy izany, ho azy ny tenin-drazana - sary sy fahatsapana).
Azonao atao ny hilaza ny fomba mampidi-doza ny dingana eo amin'ny fonony manhole ny foy, ka dia lalina, ary inona no karazana sodina ary ... ny zanakao avy hatrany manadino. Ao an-tsainy, izany no foy miaraka amin'ny loza tsy, ny mifanohitra amin'izany, te-hahita, Ary aza manendry izay, ary stomped teny an-tongony. Fa raha hifindra ny Nimble kely zanakao ary asehoy azy ny matevina fonony sy ny lalina tsara, ka na dia natsipiny tao an-maizina, vato, sy ny resaka, inona no hitranga raha misy latsaka an-dralehilahy ary mangataka mba ho hanitra ankasitrahana amiko noho ny (Fu, Maharikoriko! ) avy fofona (sns, sns) - fanazavana toy izany ho eo an-Slam fahatsiarovana mandrakizay, ary hitoetra any, ary amin'ny fotoana mety mba hampahatsiahy: "Tandremo loza" - izany hoe, ny asa momba ny haavon'ny amin'ny endriky.
Noho izany, irinao ny hahatakaran'ilay zaza anao, hahatakatra marina - mamorona sary iray ary mampihetsi-po azy. Raha eny, ho an'ny ankizy lehibe kokoa, ny sary dia tena ilaina kokoa noho ny lahateny sy teny lava. Mandeha mivantana amin'ny saina tsy fantatra izy, ary na inona na inona tonga any - dia tsy ho very mihitsy.
Ny lalao no fomba tsara indrindra ahazoana ny fampahalalana amin'ny zaza. Ary noho izany dia miorina mafy ao amin'ny fitadidiany izy ireo ary amin'ny fotoana mety dia "nipoitra" avy eo.
Raha kely dia kely ny zaza dia tokony ho toy izao, ny nenazoylivo, amin'ny endriny rehetra, ny "lesona fiarovana" rehetra. Na izany aza, ny ankizy zokiny dia mianatra tsara kokoa ny foto-kevitra manan-danja, raha tsy mendri-piderana, manazava azy ireo "milalao". Nahoana? Satria ny filalaovana ny ankizy dia toy ny mahazatra toy ny mandeha sy miaina.
Eritrereto hoe ny zanakao dia mihitsoka amin'ny hatsikana sy ny panamasinana rehetra eny amoron-dranomasina, eny fa na dia rehefa miposaka ny masoandro aza ny masoandro. Mazava ho azy fa afaka mampanantena olana zato ianao ary "tsy handroana". Saingy fomba fiasa izany, saingy mila ny ankizy isika hahatakatra ny antony sy ny fomba hiarovan-tena. Ny fikorontanana ny masoandro sy ny voka-dratsiny noho ny azy - ny hevitra momba ilay zaza dia tsy mahagaga loatra (ary tsy mahaliana), sa tsy izany? Mora kokoa ny "miresaka" sy manazava ny zava-drehetra amin'ny fiteny "an'ny ankizy" - amin'ny alalan'ny lalao, ny fifohazana ny fisainana sy ny hatsembohana (ho an'ny zanakao, tsy misy olana). Ohatra, raha nandao ny satroka tao an-trano i Barbie dia nandao ny làlany, ary ny zava-nitranga taminy, sy ny fomba nitondrana azy ... Ny lalao dia mety ary ny tsy ilàna ny manokana fotoana manokana.
Eto ianao kitay hanendasanao pancakes ao an-dakozia - ary milalao. Damn - izany masoandro, dia jereo ny fomba avy amin'ny tazo, mahatsapa, mikasika, ary izany ny masoandro, raha ny mafana ... (sy ny sisa - dia hazavaina ao amin'ny ny lalao / an'ohatra / idirana teny) ny antony sy ny vokatry ny hafanana tapaka lalan-dra. Afaka manamboatra masoandro mihitsy aza ianao miaraka amin'ny klioba mavesatra ...
Rehefa milalao ianao - misy torohevitra hafa dia tsy mitovy, tsy misy hetsi-panoherana anatiny, satria izy ireo foana no lalana, satria ianao dia mitovy, ianao dia mpiara-miasa, ianao dia mpiara-miasa sy namana.
Lesona eo amin'ilay raharaha.
Tsarovy ilay foto-dresaka mahatsiravina talohan'ny fanadinana ary raha haingana sy azo antoka dia hadinonao izany, raha vao lasa. Toy izany ihany koa. Ny hatsiaka sy ny eo ambanin'ny tavy - dia voatsindry mafy. (Ny hetsi-panoherana anatiny no tokony homena tsiny!)
Ny lesona fiarovana ihany koa dia tsara atao amin'ny fomba tsy ara-dalàna, mahatonga ny fahalianana sy ny faniriana hianatra. Ny mahaliana kokoa ny lesonao, ny lehibe kokoa ny antoka fa homen'ny ankizy azy ireo "tsara".
Ny fitsipika fototra amin'ny fianarana dia ny mampianatra mba te-hianatra ilay ankizy.
Ny famolavolana ankizy iray ary ny hanome azy lahateny dia azo atao. Tsy azo atao ny mihaino azy mandritra ny ora iray manontolo. Ny lahateny dia natolotry ny olon-dehibe mihitsy aza ary ny dimy isan-jaton'ny fahatsiarovam-peo no miala.
Lazao mazava tsara, avy eo.
Asehoy ny fomba hanaovana izany tsara.
Tian'ny ankizy ny mianika hazo. Ary tsy misy zavatra mahatsiravina eto. Izany ary ny vestibular fitaovana fanofanana, ary ara-batana dexterity. Fa mba hanazava ny zavatra ny solofo, ary mety handrava intsony mamitaka toy ny slazit, fa tsy mba manidina avy amin'ny hazo - izany no ahiahy. Mazava ho azy, ny fandraràna dia mora kokoa, indrindra raha manana traikefa ratsy amin'ny fahazazany inona izany - mba lavo sy hahazo naratra, fa hafa noho ny hazo manana fefy, hazo, toerana fanorenana sy ny fako dumps amin'ny tena manintona ny ankizy zavatra. (Ary raha resy lahatra ianao fa mafy ny "toerana mampiahiahy" ny zaza tsy nahita ny tenany, ary tsy ho fantatrao fa ratsy ny ankizy.)
Tao amin'ny fivarotana lehibe, nandao ny mpiasa na noho ny antony maromaro nandao ny tohatra manamboninahitra ambony iray. Niposaka tsara tamin'ny dian-tongotr'izy ireo teo afovoan'ny efitrano fivarotana izy, ary ny mpividy olon-dehibe dia nandeha an-tongotra, ary ireo kely-naka ny rantsantanana, izay nibitsibitsika. Ary tampoka ny tovovavy iray taona 4-5 dia nitondra ny reniny tamin'ny tanana, niteny hoe "aha?" Ary niakatra ny dingana. Nitsangana teny am-baravarankely i Neny, nibanjina ny zanany vavy ary nifampiresaka mangina niaraka tamin'ny namany. (Raha ny marina dia hitany fa vao haingana ny mpiasa iray dia niakatra niakatra an'io tohatra io, ary azony ny dikany: noho izany dia misy ny tohatra azo itokisana, ary fantany mazava tsara ny fomba hiakarana sy hifikitra amin'ny zaza.)
Tahaka ny renitantely ny tantely, avy amin'ny lafiny rehetra, nisintona ny tohatra avy hatrany ny hafa rehetra "fivarotana" ny ankizy. Ary nanomboka ny soda kely. Ankizy matin'ny fialonana sy niantsoantso izy, koa, te ho any ambony rihana dia ambony, Neny nandrahona, ka voarara, ary gasped izy ka nitondra ny ankizy, ary noisily Tezitra "ny shiftless reny."
Tsy miresaka momba raha tsy tsara na ratsy ny an'i Mama (amin'ny heviny momba ny kolontsaina), dia miresaka zavatra hafa isika. Momba ny fomba itiavan'ny olona azy tsindraindray. Ary izy ireo dia manao izany matetika kokoa noho ny tsy amin'ny fikasana tsara, fa fotsiny satria "tsy tokony ho izany", fa "tokony" izany.
Raha te hanome zaza hitombo sy hivoatra ianao, dia tsy maintsy mianatra manohitra ny hevitry ny besinimaro. Stencils, fahazarana, fitsipika efa hatramin'ny ela, ny hevitry ny mpandalo sasany, izay manana ny zavatra rehetra amin'ny zava-drehetra.
Mora kokoa ny manaiky ny antsoantso avy amin'ny vavahady, tsara kokoa ny mieritreritra amin'ny lohanao. Saingy mila misaintsaina na mialoha ny vokany ianao. Raha eny, ny zaza ihany koa dia afaka mianatra mieritreritra aloha, ary avy eo dia ataovy (mianika, mitsambikina, mihazakazaka, mitsambikina ...).
Ny fisalasalana "tsia."
Amin'izao fotoana izao any amin'ny azy sahirana amin-javatra ny ankizy, ary lazao aminy (na ny) "Aza mandeha any an-dakozia ..." Afaka mahazo antoka fa ao amin'ny manaraka ny zaza 15 minitra mampiseho ny teo. Mihevitra ve ianao, fa tsy ratsy? Tsy misy na inona na inona, ny sofiny "tsy" no tsy hita.
Ny fandraràna rehetra ny psyche dia mihaona amin'ny fankahalana. Ary ny mankatò sy mihaino (ary na dia ny mihoatra aza), dia mila manao ezaka isika, mba handosirantsika manokana "tsy mila izany - tsy handefitra" aho.
Tsarovy fa tezitra ianao ao amin'ny fianakavianao na any am-piasana. Ary sarotra kokoa ho an'ny ankizy ny manao ezaka toy izany (raha tsy noho ny maha-vahoaka feno fitiavana azy ireo). Noho izany dia mitranga izany: miteny isika hoe "Tsia! Tsy afaka ianareo! ", Ary ny zaza dia tsy vonona hihaino anay, manana" akondro eo an-tsofiny "izy. Milaza izahay hoe "aza manao an'izany", ary efa reny "manao izany, ary tsy ela"
Amin'ny fanontaniana ara-pihetseham-po, noho ny antony maromaro dia mitranga izany: ho an'ny ankizy, ary na dia ny tsy fanekenao aza, dia manorisory kokoa izy ireo, satria tsy mila valiny. Indrindra fa ny tanora tezitra, raha toa ka misy zavatra ratsy sy mandratra eo ambany fanontanianao toy ny hoe "miteny amin'ny teny rosianina aho: hatraiza?"
Miezaha hanamboatra fehezanteny mba hanaovana tsy misy "tsy", "tsia" ary "tsy azo atao".
Halaviro ireo fanontaniana momba ny fotokevitra (indrindra rehefa malahelo ianao).
Mitandrema sy fiheverana amin'ny esoeso kely naka hevitra, dia toa tena matetika ho toy ny safidy mety ho be pitsiny podkalyvaniya sy tezitra loatra, indrindra fa ny tanora (milamin-tsaina izy ireo izany).
Ary raha mbola tsy milazalaza ny tsia ianao, dia manetre ny pilina ...
Noho izany ny teninao dia tokony ho tsara sy azo antoka, tsara, fa tsy maneso.
Avereno amin'ny fomba samihafa.
Misy vaovao vaovao tonga ao anaty fahatsiarovam-bolana. Ao no itahirizana azy telo andro, ary avy eo dia esorina izany, na miova ho fahatsiarovana maharitra, izany hoe, hotsaroana, ary efa hatramin'ny ela.
raha toa ka mamiratra, mampihetsi-po ny fampahalalana;
rehefa mamerina izany ny olona, ​​dia miverina ao. Izao no nolazainy tamin'ny atidoha: ho tonga soa izy io, zava-dehibe, tadidio!
Ny tsara indrindra dia tokony ho toy izao: Izaho no namorona ilay fitaovana vaovao ary averiko indray izany: telo andro taty aoriana, herinandro taty aoriana, iray volana taty aoriana. Ary tokony atao amin'ny fomba samihafa ny famerimberenana: mahaliana sy tsy hay hadinoina izany! Toy izany koa - amin'ny fomba samihafa.
Ohatra, momba ilay fiaramanidina mampidi-doza mitovy aminao:
dia naneho ny herim-pireharezany mijoro ao anaty ala, tahaka ny hafahafa mahafinaritra, saingy tsy misy mpihaza an'ohatra mihinana izany, na kankana mihitsy aza;
namaly fanontaniana momba ny lohahevitra (fohy, tsy misy lahateny);
naseho tao amin'ny boky, teo amin'ny sary;
Namorona tantara an-tsoratra izy ireo;
nilalao tao amin'ny "sorcier malgache, izay nanamboatra fingotra ary ...";
sary hosodoko sy fanamarihana;
dia nanontany ilay fanontaniana tamin'ny fotoana mety (rehefa hita ao anaty sariitatra ahitana holatra mena), sns.
niresaka sy nifanakalozan-kevitra - ary aoka izany ho fifanakalozan-kevitra (indrindra amin'ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony).
Tahaka izany - mitohy, mitombo tsikelikely, mihalalina ary miverina amin'ny lasa - mila miresaka zavatra sarotra kokoa isika. Mihalehibe ilay zaza, saingy tsy miova ny fitsipika. Izy ireo dia ampitomboina fotsiny ihany ary manitatra, hisy ny soso-kevitra vaovao hiseho, fihodinam-baovao sy fiovaovana, fa ny maha-zava-dehibe dia iray.
Lazao ny tantara.
Ny fomba tsara indrindra entina mitondra zavatra ho an'ilay zaza dia ny mitendry azy io, miaina ao anatin'ilay sarin'ady ireo karazana toe-javatra sarotra izay mety hiditra ao anaty. Na milaza tantara iray, raha ny toe-javatra toy izany, dia mihintsy ireo karazan-tarehy tsara tarehy, izay ny zaza, indraindray, tsy miraharaha azy.